ब्लग :संसारै अन्धो छैन नि महाराज !
- सुजित गुरुङ
प्रसङ्गभिन्न भए तापनि प्रकाश सपुतको शब्द सापट लिन मन लाग्छ, ‘कहानी सुरु गरूँ मैले कहाँबाट ।’
'अँ' भन्न पनि त लाजै छ ।
११ माघको कार्यक्रम । हाम्रा अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संघसंस्थाले प्रधानमन्त्रीसँग साक्षात्कार कार्यक्रम भन्ने नाम दिएर 'दले भेला'को आयोजना गरे । म बबुरो, हाम्रा समस्या र सवाल राख्न पाइने आशामा ठाँटका साथ हतार-हतार राष्ट्रिय सभागृह पुगेँ ।
कार्यक्रम कक्ष छिर्नुअघि सुरक्षाकर्मीले मेरो झोला खोल्न लगाए । खाेलेँ । फेरि उनीहरूले 'ल ल ठीकै छ' भनेर छाेडिदिए । मैले झोलाको अर्को चेन खोलेँ । तर, खोल्न नपाउँदै 'पर्दैन-पर्दैन' भने । मेरो झोलामा सानाठूला सबै गरी छ/सात गोजी थिए होलान् । सुरक्षाकै लागि थियो भने किन सबै झोला चेक गरिएन ?
यहाँसम्म त ठीकै छ । किनकि ममाथि आशंका थियो हाेला । तर, ढोकामा पुग्दानपुग्दै फेरि अर्को एक जना सुरक्षाकर्मीले मेरो सेतो छडी समाए र फोल्ड गर्दै भने, ‘यो के हो ?’ छेवैका अरुले सेतो छडी हो भनेर जवाफ दिए । म केही बोल्न परेन ।
मभित्र छिरेको केही क्षणमै कार्यक्रम सुरु भयो । त्यो साक्षात्कारभन्दा बढी भाषणबाजी र 'मगन्तेहरूको भेला'जस्तो देखिन्थ्यो । कोही संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू भने ताली खानकै लागि 'मुखले सबैलाई ल्यापटप बाँड्दै' थिए । याे भाषणबाजीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश ठगुन्ना र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो थिए ।
म एक स्वतन्त्र नागरिक भएर हेर्दा त्यो कार्यक्रम केवल संघसंस्थाहरूको शक्ति प्रदर्शन, उनीहरूको स्वार्थी माग पेस गर्ने माध्यम र खड्ग ओलीको चुनावी प्रचारप्रसारभन्दा बढी केही थिएन । थियो भने हामीजस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देशको प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना समस्याहरूको पोको फुकाउन पाउँथ्यौँ होला । तर, पाइलापाइलामा लगाइएको सेन्सरको त्रासमा सारा आशा पानीको फोका वा साबुनको फिजजस्तै केही पलमै फुटेर गए ।
अझ स्वागत भाषण दिन आएका एक विद्वान्‌ले त झन् त्यो पानीको फोकालाई अझै ठूलो बनाउँदै आज हामी प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आफ्ना समस्या सुनाउन आइपुगेका छौँ भन्न भ्याए । तर, विडम्बना, हाम्रा ५३ बुँदे माग त पहिले नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पेस गरिसकिएको रहेछ ।
त्यही 'मागपत्रको नाटक' कार्यक्रमकै बीच रचियो, जहाँ भनिएको थियो, ‘हाल अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा कार्यरत अपाङ्ग कर्मचारीहरूलाई स्वतस्फुर्त स्थायी गरिनुपर्ने ।'
हो, यस्तै पिलन्धरे स्वार्थी मागहरूले गर्दा अपाङ्गता क्षेत्रको बदनाम भएको हो । हामीलाई राम्ररी थाहा छ, जोडघटाउ, सामान्य व्याकरण र साधारण अङ्ग्रेजीका हिज्जे नजान्ने अपाङ्गता भएका अदक्ष व्यक्तिहरू इमान, इज्जत र नोट बेचेर कर्मचारी भएका छन् । जब यो कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ भने फेरि थप कमजोर बनाउने नाटक किन मञ्चन गरिँदै छ ?
मान्छु, यो उनीहरूको बाध्यता पनि हुन सक्छ । तर, तिनै अक्षमहरूलाई स्थायी गरिनु भनेको देशको विकास सयौँ वर्ष पछाडि धकेल्नु पनि त हो । यस्ता कमजोर मानिसहरूको पक्षपोषण नाम चलेका संस्थाहरूले गर्लान् भन्ने कसले सोचेको हुन्छ होला र ? तर, यिनै संस्था चलाउने अधिकांश टाउकेहरू यस्तै अयोग्य किसिमका शिक्षकहरू छन्, जसले मै खाऊँ, मै लाऊँको सिद्धान्त धारण गरेका छन् । उनीहरूलाई युवा र योग्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पटक्कै चिन्ता छैन । र त आरक्षण घटाउने निर्णयको खुब विरोध गरे ।
ख्वामितहरू त पैसा र शक्तिको आडमा सजिलै आरक्षण कोटाको भोग गरिबक्सिन्छ क्यारे ! तर, ख्याल रहोस् महाराज, गएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा खुल्लाबाट नाम निकाल्नेमा योग्य र सक्षम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा थिए । महाराजको, अँ मेरो पनि त आँखामा ज्योति छैन । तर, सिङ्गो संसार अन्धो छैन महाराज ! जसले योग्य साथीहरूको क्षमताको नजरअन्दाज गरोस् ।
आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूका लागि बजारमा उपलब्ध आयोगका सबै किताब श्रवण पुस्तकको रूपमा उपलब्ध गराइयोस् ! भनेको लेखिदिन सक्ने लेखन सहयोगी उपलब्ध गराइयोस् ।
तर, यतातिर सोच्ने फुर्सद निकाल्नुभएको भए कहाँ प्रधानमन्त्रीको जयजयकारमा जान भ्याइबक्सिन्थ्यो र ! अनि फेरि महाराजभन्दा तल्ला पिँढी सक्षम भए भने त महाराजको जयजयकार कसले गर्ने ? महाराजको पनि महाराजको जयजयकारमा कसले ताली पिट्ने ?
शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सयौँ पुस्तक पढेर जाँदा आँखा नदेख्नेहरू एउटासम्म पनि किताब नपढी परीक्षा केन्द्र गइरहँदा तपाईंहरूको मन रुँदैन ? तपाईंको छाती पोल्दैन ? आँखा नदेख्नेहरू बेरोजगार भएर सडकमा मागिरहँदा तपाईंहरूको मुटु दुख्दैन ? ख्वामित त खुलेआम भनिबक्सिन्छ, ‘व्यवस्थित रूपमा सडक शो गराउन हामी सहयोग गर्छौं ।'
अझ तपाईंलाई नै चाहिन्छ हगि, तिनै तहमा समानुपातिक कोटा ? ए ए ! यो त दयाको भीख कहाँ हो र ! ल्याकत भए प्रत्यक्षतर्फको टिकट लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुस् भगवान ! होइन भने परस्पर विरोधाभासपूर्ण माग राखेर हामीलाई झुक्याउने खेल नखेल्नुस् ।
आखिर पहिले नै मागपत्र बुझाइएको भए किन त्यत्रो जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाईु दुःख दिएको ? तपाईंलाई त आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु न थियो । अपाङ्गहरू माझ 'देखिस्, हामी प्रधानमन्त्रीको नजिक छौँ' भनेर देखाउनु थियो । प्रधानमन्त्रीको अगाडि हेरिबक्सियोस्, हामीसँग यति धेरै समर्थन छ भनेर देखाउनु थियो । र, तपाईं सफल पनि हुनुभयो । विद्यार्थी बटुलेर भए पनि तपाईंले आफ्नो अस्लियत छर्लङ्ग पार्नुभयो ।
हाम्रो माग राख्नकै लागि थियो भने सरकार काम चलाउ हुनुअघि नै साक्षात्कार सभा किन गरिएन ? अनि प्रधानमन्त्री अपाङ्गहरूप्रति सकारात्मक होइबक्सन्थ्यो भने तीन वर्षसम्म हामीसँग भेट गरौँजस्तो उहाँलाई किन लागेन ?
जब दिसा लाग्छ, तब मात्र चर्पी सम्झिँदा चर्पी नगन्हाएर बास्ना आउँछ र ? हो, प्रधानमन्त्रीको सभामा खुब शौचालय गन्हाइरह्यो । एक जना बौद्धिक अपाङ्ग कार्यक्रमभरि नै चिच्याएर चित्कार गरिरहे । त्यो प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पनि सुनिएकाे थियाे ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७, १३:३७:००